Samoa qurux badan waxay soo dhaweynaysaa horumarka xumbada safarka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Samoa » Samoa qurux badan waxay soo dhaweynaysaa horumarka xumbada safarka
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Wararka Samoa • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Maamulaha Hay'ada Dalxiiska Samoa Fa'amatuainu Lenata'i Suifua
Samoa waxaa lagu dhiirigeliyey isku-socodka safarka kaaran-ka-baxsan ee u dhexeeya Australia iyo New Zealand
Xumbada safarka ee u dhaxeysa New Zealand iyo Jasiiradaha Cook waxaa loo qoondeeyay May
Aasaasidda xumbada Trans-Tasman waxay dhiirrigelinaysaa kalsooni ka dhexeysa hawlwadeennada dalxiiska Baasifigga
Xumbadu waxay siin doontaa faa'iidooyin muhiim u ah dhammaan waddamada Baasifigga
The Maamulka Dalxiiska Samoa (STA) waxaa lagu dhiiri galiyay qorshaha safarka kaaran karantiil la'aanta ee ka bilaabmay xalay inta udhaxeysa Australia iyo New Zealand.
Tani waxay imaaneysaa ka dib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in xumbo safar laba-geesood ah oo u dhaxeysa New Zealand iyo Jasiiradaha Cook la qorsheeyay bisha May.
STA waxay soo dhaweyneysaa ku dhawaaqista sidoo kale horudhac kale oo muhiim u ah xumbo safar ballaaran, oo dib u bilaabi doonta dalxiiska una oggolaan doonta dhowr Jasiiradood oo Baasifig ah, oo ay ku jiraan Samoa, inay dib u dhisaan oo ay dardargeliyaan soo kabashadooda dhaqaale.
Maamulaha guud ee Hay'ada Dalxiiska Samoa Fa'amatuainu Lenata'i Suifua ayaa ku dhawaaqay: "Abuuritaanka xumbada Trans-Tasman waxay dhiirigalinaysaa kalsoonida wadayaasha dalxiiska Baasifigga in xumbo safarka Baasifigga sidoo kale lama huraan ah."
Xumbadu waxay siin doontaa faa'iidooyin muhiim u ah dhammaan waddammada Baasifigga, iyo sidoo kale Australia iyo New Zealand, dib uga soo kabashada caqabadaha dhaqaale ee ay soo bandhigeen COVID-19 ee faafa adduunka iyo Samoa waxay eegi doontaa qurba-jooggeeda New Zealand si ay uga caawiso kobcinta dhaqaalaheeda. marka safarku si nabadgelyo leh dib ugu bilaabo, waxaan rajeynayaa dhamaadka sanadka. Caafimaadka iyo badbaadada deegaanka Samoan aiga (qoyska) ayaa ah mudnaanta ugu sareysa dowladda.
Iyada oo la soo saarayo talaalada, oo ay weheliso soo bandhigida habab badan - oo ay ku jiraan baafinta xiriirka iyo baaritaanka joogtada ah - qaab dhismeed adag ayaa la sameeyay